ထင်အောင် | MoeMaKa Burmese News & Media
ငြိမ်းချမ်းအေး - လောကကြီးရဲ့မောင်းနှင်အားများ
မိုးမခအထောက်တော်(တက္ကဆပ်) - အမာရီလိုလူငယ်များအတွက် ဘက်စုံစခန်းသွင်းသင်တန်း ဖွင့်လှစ်ပို့ချမည်
>တုံးကေဵာ် ဘူဖစ်ပၝစေသော်ဝ်
Posts Tagged ‘ ထင်အောင် ’
ထင်အောင် – မြန်မာမှုကို ချစ်မြတ်နိုးကြသူများ (မိုးမခ) မတ် ၂၄၊ ၂၀၁၆ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရော နိုင်ငံခြားသားတွေပါ အင်မတန်သဘောကျပျော်တတ်ကျတဲ့ မဟာသင်္ကြန်ပွဲတော်ပြီးနီးကပ်လာ ပြန်ပါပြီ။ မြန်မာနှစ်ကူးချိန်ဟု သတ်မှတ်ထားတဲ့ ရေကစားပွဲတော်သင်္ကြန်နီးလာသည်နှင့်အမျှ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူ တွေကလည်း သင်္ကြန်ကာလအတွင်း...
The Thwin Cinema in Rangoon. (PHOTO: Philip Jablon) ထင်အောင် – ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က ကြည့်ခဲ့ဘူးသော ရုပ်ရှင်ကားများနှင့် ရုပ်ရှင်ရုံများ (မိုးမခ) မတ် ၄၊ ၂၀၁၆ ယနေ့ရောင်းအားကောင်းနေသောမဂ္ဂဇင်းများ၊...
ထင်အောင် – တရားမဝင်လိုင်စင်မဲ့ယာဉ်များနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ
ထင်အောင် – တရားမဝင်လိုင်စင်မဲ့ယာဉ်များနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၆ ရှေးဦးတည်ထွင်သူများကြောင့် လူသားများအတွက် အသုံးပြုစရာပစ္စည်းများ အမျိုးမျိုးပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ အိမ်ရှင်မများအသုံးပြုရန်ပစ္စည်းများ၊ လူသားများ၏လုပ်အားကိုသက်သာလာစေရန် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများတည်ထွင်လာကြပါတယ်။ လူ တွေကလည်း သဘောကျကာ ဝယ်ယူသုံးစွဲကြပါတယ်။...
ထင်အောင် – ကျွန်တော် အင်မတန်ညံ့ပါတဲ့ မြန်မာစာ
ထင်အောင် – ကျွန်တော် အင်မတန်ညံ့ပါတဲ့ မြန်မာစာ (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၈၊ ၂၀၁၆မြန်မာစာကို မြန်မာလူမျိုးအားလုံးနီးပါး ရေးနိုင် ဖတ်နိုင်ကြပါတယ်။ တခြားသောနိုင်ငံများမှ လာ၍ စီးပွါးလာရှာသူများပင်အချိန်အနည်းငယ်အတွင်း နှုတ်ခွန်းဆက်တတ်လာကာ ထမင်းစားရေသောက် ပြောတတ်လာကြပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်မိဘများက မိမိတို...
စာရေးသူနဲ့ မိုးမခက စာအုပ်များ ပြန်တွေ့ကြစဉ် ထင်အောင် – ကျွန်တော်နှင့် ကျန်းမာရေး (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၆ ကျွန်တော်ဟာ ငယ်ငယ်က ကျန်းမာရေးမှာ အလွန်ချူချာတယ်လို့ အမေကပြောဘူးပါတယ်။ ကျွန်တော်ကို ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်း...
ထင်အောင် – ကျွန်တော်ညှပ်ခဲ့ဘူးသော ဆံသဆိုင်များ (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၅ ငယ်စဉ်က ဘာဘာလာပြီဆိုသောအသံကိုကြားရမှာကို အလွန်စိုးရိမ်မိပါတယ်။ ဘာဘာဆိုတာက သံဘူးကိုလက်မှာကိုင်ကာ ဘာဘာ-ဘာဘာဟု လမ်းတလျှောက်အော်လာသော ဆံသဆရာကုလားကြီး များဖြစ်ပါတယ်။ သူကိုင်လာသောဆေးရောင် မှိန်နေတဲ့...
ထင်အောင် – ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲက အမှတ်တရအဖြစ်ကလေးများ
ထင်အောင် – ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲက အမှတ်တရအဖြစ်ကလေးများ (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၁၇၊ ၂၀၁၅ ၁၉၈၈ ခုနှစ်က စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတယ်လို့ ကြေငြာပြီးတဲ့နောက် အမိန့်တွေ ကြေငြာချက်တွေ အမျိုးမျိုးကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါ တယ်။ ပြည်သူတွေရဲ...
ထင်အောင် – တိုင်းရင်းမေကိုလည်းဖတ်တဲ့ ကျွန်တော်
ထင်အောင် – တိုင်းရင်းမေကိုလည်းဖတ်တဲ့ ကျွန်တော် (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၈၊ ၂၀၁၅ ကျွန်တော်ငယ်စဉ်ကဖတ်ခဲ့ဘူးသော ဂျာနယ်မဂ္ဂဇင်းတွေအထဲမှာ ထူးခြားနေတဲ့ဂျာနယ်က တိုင်းရင်းမေဂျာနယ်ဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းရင်းသူဂျာနယ်-ယုဝတီဂျာနယ်ဆိုတာတွေကိုလည်း ဖတ်ခဲ့ဘူးပါတယ်။ အမည်ကြားလိုက်တာနဲ့ ဒီဂျာနယ်တွေဟာအမျိုး သမီးတွေအတွက်ဖတ်ရန် သီးသန့်ထုတ်ဝေပေးနေတဲ့ အထူးဂျာနယ်ဆိုတာကို သိရှိနိုင်ပါတယ်။...
ထင်အောင် – ကျွန်တော်နေနေတဲ့ အတ္တလမ်းသွယ် (မိုးမခ) ဇွန် ၁၈၊ ၂၀၁၅ ကျွန်တော်တို့ နေထိုင်နေတဲ့ကမ္ဘာကြီးဟာ တကယ်တော့တိုင်းပြည်များနဲ့ စုပေါင်းတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်း ပြည်တိုင်းမှာလည်း သူအကျယ်အဝန်းနဲ့သူ ရှိနေကျပါတယ်။ အဲဒီတိုင်းပြည်ဆိုတာကလည်း မြို့တွေ ရွာတွေစုထားတော့မှဖြစ်...
ထင်အောင် – ကျွန်တော်အားကျခဲ့ရသောစာရေးဆရာကြီးများ
ထင်အောင် – ကျွန်တော်အားကျခဲ့ရသောစာရေးဆရာကြီးများ (မိုးမခ ) မေ ၇ ၂၀၁၅ ကျွန်တော်ဟာ စာရေးရမှာကို အလွန်ပျင်းရိသော သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းက အတန်းထဲမှာ ဆရာမက မှတ်စုစာတွေခေါ်ပေးနေချိန်မှာ ကျွန်တော်က ရေးချင်သလိုရေးပြီး လိုက်မှတ်ထားပါတယ်။ ဆရာမက “မောင်ဘ...
ထင်အောင် – လက်အုပ်ချီပုံရိပ်နှင့် မင်္ဂလာပါ နှုတ်ခွန်းဆက် (မိုးမခ) မတ် ၂၅၊ ၂၀၁၅ မတ်လထုတ် မိုးမခဂျာနယ် အတွဲ၂အမှတ်၃တွင်ပါရှိသော ဆရာငြိမ်းချမ်းအေး ရေးသားထားသော”တော်လှန်ရေးဟာ စာသင်ခန်းက စရပါမယ်”ဆောင်းပါးကိုဖတ်ရင်း တွေးစရာလေးတွေပေါ်လာတာကြောင့် စာရေးဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးကို...
ထင်အောင် – ကျွန်တော်နဲ့ပေါင်းခဲ့တဲ့ အဖေ့သူငယ်ချင်းများ
ထင်အောင် – ကျွန်တော်နဲ့ပေါင်းခဲ့တဲ့ အဖေ့သူငယ်ချင်းများ (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၄ ကျွန်တော့်အဖေက စာရေးဆရာပါ။ ကျောင်းသားအရွယ်က ရကသဥက္ကဋ္ဌလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆယ်တန်းကျောင်းသားအရွယ်မှာ ဂျပန်ဖက် ဆစ်တွေကိုတော်လှန်တာနဲ့ကြုံလို့ တပ်ထဲဝင်ခဲ့ပါတယ်။ တပ်သားအဖြစ်ဝင်ခဲ့တာပါ။ တော်လှန်ရေးပြီးတော့ တပ်သားကျော်ဆိုတဲ့...
ထင်အောင် – ကျွန်တော်ကြိုက်ခဲ့ဘူးသော အငြိမ့်နှင့် ဇာတ်ပွဲများ (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၄ ကျွန်တော်ငယ်စဉ်က အပျော်အပါးကို အလွန်ကြိုက်ခဲ့ပါတယ်။ အဖိုးအဖွားတို့ နဲ့ပုံမှန် သွားကြည့်ရသော ရုပ်ရှင် ပြဇာတ်များကို...
ထင်အောင် – ဆရာမကြီးပြောတဲ့ ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်အကြောင်းမှ အလွဲလေးတစ်ခု
ထင်အောင် – ဆရာမကြီးပြောတဲ့ ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်အကြောင်းမှ အလွဲလေးတစ်ခု (မိုးမခပေးစာ) ဒီဇင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၄ ယနေ့ ထုတ်ဂျာနယ်များထဲမှ ‘အဓိပတိသတင်းဂျာနယ်’ အတွဲ-၂ အမှတ်-၁၈တွင်ပါဝင်သော “ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်၏ ငယ်ဘဝဖြစ်စဉ်အမှန်ပြောပြသူ ဆရာမကြီး ဒေါ်ဒက်ဖနီကျော်” ဆိုသောဆောင်းပါးကို...
ထင်အောင် – ကျွန်တော့်ကို ပညာပေးခဲ့တဲ့ စာပေဗိမာန် မဂ္ဂဇင်း (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၁၂ ၊ ၂၀၁၄ နေ့စဉ် ထွက်နေသော ဂျာနယ် စာစောင်များ သတင်းစာများကို ဖတ်နေရာမှ ငယ်ငယ်တုံးက...
ထင်အောင် – ပြောင်းလဲသွားသော မြန်မာစာ အသုံးအနှုံးများ
ထင်အောင် – ပြောင်းလဲသွားသော မြန်မာစာ အသုံးအနှုံးများ (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၄ ကျွန်တောာ် နှစ်ခြောက်ဆယ် ကျော်ကျော် ဖတ်လာခဲ့သော သတင်းစာများတွင် အရေးအသား အသုံးအနှုံးများ ပြောင်းလဲ သွားတာကို...